Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Shir Madaxeexdka 29-aad ee Jaamacadda Carabta. – Xeernews24
Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Shir Madaxeexdka 29-aad ee Jaamacadda Carabta.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saaka u ambabaxay Magaaladda Dammaam ee dalka Sucuudiga, halkaas oo uu ka furmi doono Shirka 29-aad ee Madaxda waddamada ku mideysan Ururka Jaamacadda Carabta.
“Madaxweyne Farmaajo waxa uu khudbad ka jeedin doonaa shirka, isagoona Madaxda kale ee waddamada Carabta la wadaagi doona xaaladaha siyaasadda, ammaanka iyo horumarka ka socda dalka.” Ayuu yiri Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Mudane Cabdinuur Maxamed Axmed.
Horrey waxaa ugu sugnaa dalka Sucuudiga wafdi uu hoggaaminayay Wasiirka arrimaha dibadad Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad oo hordhac u ahaa wafdiga Madaxweynaha, sidoo kalana ka qeyb galayay shir wasiirrada arrimaha dibadda ee Jaamacadda carabta oo khamiistii ka furmay magaalada Riyaad, laguna qorsheynayey ciwaannada Shirka 29aad ee Madaxweynayaasha.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/122-640x379.png 379 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-04-14 10:22:422018-04-14 10:22:42Madaxweyne Farmaajo oo ka qeyb galaya Shir Madaxeexdka 29-aad ee Jaamacadda Carabta.
Mareykanka iyo Xulufadiisa oo weerar xoogan ku qaaday dalka Siiriya (Daawo ... Yaa u sheege Cabdi Iley in Beesha Gabooye guur la,aani hayn ee maamulkiisa beelaysan...